Etu esi wụnye ROM site na weebụ na gam akporo | Gam akporosis
Ezigbo 'ol times n'ime ịwụnye ROM dị mkpa iji nwee ekwentị kwụsiri ike na-enweghị nsogbu siri ike na ahụmịhe nke iji ụbọchị. Ma ọ bụrụ na anyị gafere itinye faịlụ zip na microSD draịva, n'ọdịnihu dị nso eziokwu nke "na-egbu maramara" ma ọ bụ wụnye ROM ga-esi na ihe nchọgharị weebụ.
Yabụ ihe niile ga - adị n'ịntanetị yana anyị agaghị achọ ihe ọ bụla karịa ihe nchọgharị dakọtara inwe ike ịwụnye mmelite ma ọ bụ wụnye ngwa ngwa nke na-ahapụ ya dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ewezuga eziokwu ahụ na ọ masịrị ọtụtụ ma ọ bụ naanị obi ụtọ ịnwale ihe ndị ọzọ mgbe oge ahụ gafere nke anyị na-emetụghị ihe ọ bụla aka.
1 Wụnye ROM ọhụrụ
2 Ichapu ROM site na weebụ
3 Iji nyocha sitere na Chromium
Wụnye ROM ọhụrụ
Maka anyị ndị ejirila wụnye ngwa ngwa ma ọ bụ omenala ROM I chere onye ọzọ ihu bụ ihe a na-eme mgbe niile nke anyị na-ahụghị ihe egwu ọ bụla, ma ọ bụ eziokwu na maka onye ọrụ ọhụụ nke mere ya na nke mbụ ya, oge a ga-eri na ịme ya nwere ike ịbụ karịa nsogbu siri ike.
Y na ọbụna n'ihi na elu ọrụ ọbụna mfe omume ndị dị otú ahụ dị ka PC na-amata na ngwaọrụ O nwere ike bụrụ ezigbo ihe ịma aka, nke ahụ na-adịkwa n'etiti ọgụ igwe iji hụ onye nwere ike ime karịa.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iji zere nsogbu ndị a niile, ọ dị ka anyị ga-enwe n'aka anyị ohere ịwụnye ROM site na web. Ma nke ahụ bụ Ihe niile malitere ịgbanwe mgbe Google bipụtara ya gam akporo Flash Ngwá Ọrụ dị ka ịnwa ime ka ọrụ nke ịwụnye ROM dị mfe ma onye ọ bụla ga-eji otu ngwaọrụ ahụ.
Ihe dị egwu banyere afọ ndị ahụ bụ na ọ bidola idobe nke ahụ ime ya site na weebụ ga-abụ usoro kachasị mfe ma na-arụpụta ihe niile a ga-eme. Ma ọ bụ na usoro ahụ n'onwe ya mejupụtara karịa nbudata onyonyo ahụ ka ị buru ibu site na ROM ma jiri iwu ndị sitere na PC nyere anyị aka ịrụ ọrụ ahụ. Site web ihe niile ga-kachasị ka ọ dịkwuo mfe.
Ichapu ROM site na weebụ
Ngwaọrụ Google na-enye ndakọrịta na ntinye nke ROM sitere na weebụ, ma ọ bụ nnọọ ihe mgbochi na-arụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ, na enwere ike itinye ihe oyiyi AOSP na ngwugwu ngwa ngwa gọọmentị.
Iji nyocha sitere na Chromium
Versiondị nnwale nke nnabata web anyị maka GrapheneOS dị ugbu a:https://t.co/29OBsANCta
Enwere ike iji nke a site na ihe nchọgharị site na nkwado WebUSB. Imirikiti ihe nchọgharị ndị dabeere na Chromium na-akwado gụnyere Chrome, Edge na Brave. Ọ dịghị mkpa iji na-agba ọsọ ọ bụla ọzọ software.
- GrapheneOS (@nke_ifeany) January 24, 2021
Lin kwa haziri web installer maka ihe omuma ohuru ohuru a maara dị ka GrapheneOS. Ọ bụrụ na anyị maara na Chromium na-enye nkwado WebUSB ebe ụdị nke 61, ihe nchọgharị ọ bụla dabere na Chromium, dị ka Chrome ma ọ bụ Microsoft Edge, ma wụnye ya na PC, nwere ike iji ngwaọrụ na-egbu maramara.
Na Windows ị chọrọ ọkwọ ụgbọ ala pụrụ iche nke ga-ebudata ozugbo site na Windows Update, yabụ anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla ma a bịa n'ijizi ngwa ọrụ ntanetị a iji wụnye omenala ROM.
Nke a bụ njikọ ya nchekwa Fastboot.js, nke ya na ihe e kwuru na ihe nchọgharị ahụ nwere ike ịgbanye ROM site na nkasi obi nke weebụ n’etinyeghi ihe obula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọdịnihu nke "ikpuchi" ma ọ bụ ịwụnye ROM ga-agafe site na ime ya site na ihe nchọgharị weebụ
Samsung weputara mmelite nke Galaxy Buds Pro na oganihu na kagbuo mkpọtụ
New Samsung Galaxy F62 na batrị 7.000 mAh: atụmatụ, nkọwa na ọnụahịa